May 2018 – Kalfadhi
May 31, 2018 Kalfadhi
Gudoomiyaha Golaha shacabk Soomaaliyeed Mudane Maxamed Sheekh Mursal ayaa maanta kulan la qaatay guddiga xeerhoosaadka u qaabilsan Barlamaanka. Mas’uuliyiinta Guddigaan ayaa u waramay Gudoomiye Mursal waxana ay ka dalbadeen xoojinta wada shaqeenta kala dhaxaysa qeybaha gudiyadda. Waxaa meel wanaagsan maraya daadajinta shuruucda barlamaanka iyo ku dhaqanka sharciyadda xeer-Hoosaadka u degsan barlamaanka Soomaaliya. Guddigu waxay soo jeediyeen wax ka badalka xeer-hoosaadka barlamaanka 9aad si loo diyaariyo ama loo dhameystiro xeer-hoosaadka barlamaanka 10aad.
Guddiyada baarlamaanka oo loo dhisayo xafiisyo gaar ah
May 31, 2018 May 31, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in dhammaan guddiyada baarlamaanka loo dhisayo xafiisyo qalabeysan si loo dardargeliyo shaqooyinka guddiyada. Golaha shacabka waxa uu leeyahay 14 guddi oo la xisaabtama wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya. ‘’ Si loo dardargeliyo howlaha guddiyada baarlamaanka waxaan maanta booqday xafiisyo cusub oo ay yeelanayan guddiyada baarlamaanka,’’ ayuu yiri guddoomiye Mursal. Guddoomiye Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa dalbaday in muddo toddobaad ah lagu dhameeyo dhismaha iyo qalabeynta xafiisyadaasi.
May 30, 2018 May 30, 2018 Kalfadhi
Shirikii Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maanta lagu meel mariyay hinside sharciyeedka dambiyada kufsiga,sida ay baahisay wakaaladda SONNA. Golaha wasiirada ayaa dood dheer kadib isla gartay in la ansixiyo hindise sharciyeedka dambiyadda la xiriira kusiga . Hindise sharciyeedkan ayaa loo gudbin doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uu uga dooddo una ansixiyo. Arrintan waxa ay wax badan ka qaban doontaa dambiyada la xiriira kufsiga ee mararka qaar ka dhaca wadanka.
Cali Nuur Xuseen (Boodaye) oo hore uga tirsanaa xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si xoogan uga hadlay masuuliyada xildhibaannada ka saraan marxalada uu dalka ku jiro. ‘’ Xildhibaannada Qarankoow ogaada mas’uuliyad wadareed baa idinka saran dalka,’’ ayuu yiri Cali Nuur Boodaye oo qoraal kooban soo dhiggay bartiisa Twitter. Xildhibaankan hore ayaa dhinaca kale ka hadlay qaabka ay xildhibaannada qaranka kaga falceliyan khaladaadka jira ee ay arkaan, ‘’ Haddaad khalad aragtaan haku ekaanina baraha bulshada in aad ka qeylisan ee isku daya in aad saxdaan sida uu sharciga idin…
May 29, 2018 May 29, 2018 Kalfadhi
Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan,guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qeyb galay xaflada dhaarinta ee guddoomiyaha maxkamadda Sare garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed . Munaasabada lagu dhaariyay guddoomiyaha Maxkamadda Sare ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada ee caasimada Muqdisho. Guddoomiyaha guddiga dastuurka ee golaha shacabka xildhibaan Abuukate Shariif sheekh Maye ayaa dhaariyay guddoomiye Baashe. Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa dhawaan guddoomiye Baashe u magacaabay guddoomiyaha Maxkmadda Sare ee dalka.
May 29, 2018 Kalfadhi
Afhayeenka baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug mudane Cali Gacal Casir ayaa si adag u beeniyay wararka sheegaya in la isku dhafay xildhibaannada ku jira baarlamaanka maamulkasi,sida ay tabisay idaacada Goob Joog. Hadalkan ayuu guddoomiyaha ka sheegay kulan wada tashi ah oo uu dhinacyada bulshada kula qaatay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Guddoomiye Casir ayaa sido kale beeniyay in aanu jirin dastuur loo sameeyay Galmudug. “Waxbo kama ogeyn isku dhafka xildhibaannada Galmudug, Dastuurka la sheegay maba arag, liiska xildhibaannada la iima keenin” ayuu yiri Casir. Waxaa beryahan soo if baxayay khilaaf dhinaca…
May 28, 2018 May 28, 2018 Kalfadhi
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in la hakiyay kulamada guud Aqalka Hoose inta ka harsan bisha barakeysan ee Ramadan. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in ay sii socon doonan kulamada guddiyada golaha shacabka. Dhinaca kale,Xildhibaannada golaha shacabka ayaa dib u dhiggay kulan su’aal weydiin ahaa oo uu maanta ka cudur daartay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. Xubno ka tirsan guddiga arrimaha bulshadda ee golaha shacabka ayaa ku dhaliilay wasaarada waxbarashada musuq maasuq iyo…
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankooddii caadiga ahaa,sida ay xaqiijisay waaxda warfaafinta Aqalka Hoose. Ajandaha kulanka ayaa ah su’aal oraaheed ku wajahan wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Daahir Cusmaan. Wasaarada waxbarashada ayaa dhawaan soo gebagabeysay imtixaanka qaranka oo ay sanadkan u farriisten 27,600 oo arday. Mudaneyaasha golaha shacabka ayaa su’aalo la xiriira shaqooyinka wasaarada waxbarashada waxa ay weydiin doona wasiirka.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo dhaleeceyay xil ka qaadista guddoomiyaha maxkamada sare
May 27, 2018 May 27, 2018 Kalfadhi
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadajir ayaa si kulul u dhaleecayay xil ka qaadis uu maanta madaxweyne Farmaajo ku sameeyay guddoomiyihii maxkamada sare mudane Ibraahim Iidle Suleymaan. ‘’ Dastuurka waxa uu muujinaya in madaxweyne Farmaajo uusan lahayn awood uu xilka kaga qaado guddoomiyaha maxkamada sare, ‘’ Waxaa uu magacaabi karaa ama ceyrin karaa guddoomiyaha maxkamada sare marka uu talo ka helo guddiga adeegga garsoorka,’’ ayuu yiri mudane Warsame. Siyaasigan ayaa qorraal uu ku dhaleeceynayo go’aanka madaxweynaha waxa uu soo geliyay baraha Facebook iyo Twitter. Madaxweyne Farmaajo…
War kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa xil kaqaadis loogu sameeyay gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka waxaana la magacaabay mid cusub. Bayaanka kasoo baxay xafiiska Villa Soomaliya ayaa u qornaa sidatan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xil ka qaadis ku sameeyay Guddoomiyaha Maxakamadda Sare ee dalka Mudane Ibraahim Iidle Suleymaan, waxa uuna xilkaas u magacaabay Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed. Madaxweynaha oo tixgalinaya cabashada muwaadiniinta Soomaaliyeed, garsoorayaasha, hawl-wadeennada garsoorka iyo xirfadleyaasha sharciga ee la xiriira in la helo garsoor hufan oo caddaalad ah, ayaa…